८४ हजारले दिए कोरियन भाषा परीक्षा, कहिले आउँछ नतिजा? - Everest Dainik - News from Nepal
८४ हजारले दिए कोरियन भाषा परीक्षा, कहिले आउँछ नतिजा?
काठमाडौं, जेठ २६ । यो वर्षको कोरियन भाषा परीक्षामा ८४ हजार २ सय १५ जना सहभागी भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागअनुसार ९२ हजार ३५६ जनाले आवेदन भरेकामा ८ हजार १४१ जना अनुपस्थित रहेका थिए ।
शनिबार १५६ जना परीक्षार्थी निष्कासित तथा पक्राउ भएका थिए । अरुको नाममा परीक्षा दिन आएहरुलाई नियन्त्रणमा लिइयो भने नियम विपरित परीक्षामा सहभागीहरु निष्कासित भएको विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । पक्राउ परेकामध्ये नक्कली परीक्षार्थीलाई सार्वजनिक मुद्दा चलाइनेछ ।
याे पनि पढ्नुस काेरिया जान ५५ हजार आवेदन
आगामी वर्षका लागि कोरियाले १० हजार ५० जना नेपाली कामदारको कोटा दिएको छ । परीक्षाको नतिजा नतिजा असार १३ गते प्रकाशित हुनेछ । यो परीक्षाबाट छानेर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ७ हजार ५० र कृषि क्षेत्रमा ३ हजार नेपाली लैजाने तयारी छ ।
याे पनि पढ्नुस यो वर्ष कति परीक्षार्थीले दिदै छन् कोरियन भाषाको परीक्षा, दुई ठाउँबाट परिक्षा दिने व्यवस्था
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तरगत सन् २०२० को कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फारम चैत ८ गतेबाट खुला भएको थियो । रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य भएका कारण धेरै आवेदन पर्ने गरेको छ । नेपालबाट सन् २००८ देखि ईपीएसमार्फत कामदार कोरिया जान थालेका हुन् । आकर्षक कमाइ हुने भएकाले कोरिया जान खोज्ने युवाको संख्या उच्च छ ।
याे पनि पढ्नुस आंशिक रुपमा खारेज हुँदै कोरियाली भाषा परीक्षा
ट्याग्स: EPS, Korean Language